distrikan’Atsimondrano teo aloha noho ny filazana fa rovitra ny boky mirakitra ara-dalana izany dia efa voavaha tanteraka ny olana ankehitriny. Noho ny fisian’ilay tantsoroka ao anatin’ny tetikasa fanatsarana ny fitantanana ny fananantany ARSF (Appui à la Réforme et à la Securisation Foncière) no angady nananana sy vy nahitana izany, raha tsy maintsy niandry 20 andro avokoa ny rehetra teo aloha. Tsy niova ny vola haloa raha araka ny fantatra fa mijanona ho 2.000 Ariary toy ny teo aloha ihany. Nametrahana « guichet unique » mihitsy ao amin’ity sampandraharaha ao Atsimondrano ity ary vao nahazo fitaovana koa izy ireo. Tsiahivina moa fa efa nampidirina anaty solosaina avokoa ny antontan-kevitra momba ny tany mba hanafaingana ny asa izay fantatra fa mbola hitohy hatrany.